4 askari oo miino ku qaraxday Muqdisho - BBC News Somali
4 askari oo miino ku qaraxday Muqdisho
11 Sebtembar 2010
Image caption Askarta dowladda ku meelgaarka ah
Afar askari oo ka tirsan ciidamada dawladda ku meel-gaadhka ah ee Soomaaliya, ayaa maanta ku dhintay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ee dagaaladu aafeeyeen muddo ilaa labaatan sano ah.
Ciidamada dowladda ku meelgaarka ah, ayaa dhintay kadib markii baabuurka ay saarnaayeen uu dulmaray miino jidka loo galiyay, oo kadibna ku qaraxday.
Qaraxa ayaa ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Sida ay BBCda u xaqiijiyeen dad goobjoog ah waxa miino kale la kacday gaari ay saarnaayeen ciidan boolis ah, oo marayey waddo ku taal degmada Xamar Jajab, waxaana ku dhaawacmay dhowr askri oo booliis ah.
Kooxaha kacdoonka ee ka soo horjeeda dowladda, ayaa inta badan waddooyinka galiya miinooyin ay ku bartilmaameedsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, balse inta badan ma aha oo kaliya kuwaas cidda ay waxyeeladu ka soo gaarto.
Waxaa dhacday in dad rayid ahna ay ku dhintaan.
Waxaa wali Muqdisho la isku horfadhiyaan goobihii lagu dagaalamayay ilaa bartamihii bishii hore ama Ramadan-ka, iyadoo dagaallo todobaadyo socday oo hadda qaboobay ay ku dhinteen in ka badan 150 qof ayna ku dhaawacmeen dad kor dhaafaya 300.
Dagaaladan ayaa bilowday kadib markii Xarakada al-Shabaab ay sheegtay in ay bilowday dagaal ay kaga taqalusayso wax ay ugu yeertay cadowga ku soo duulay iyo kalkaaliyayaashooda, hase yeeshee, waxaa muuqata in dagaalada aan guulo la sheegi karo laga gaarin. Inkastoo, labada dhinacba ay sheegteen in dagaaladaas ay guulo ka gaareen.